Ngosiputa Ngwa maka nwanyị dị afọ 30
Ememe ememe okpukpu nwere ike na-eduzi n'ụlọ. Nke a ga-enyekwa aka na ịchọ mma mma maka nwanyị nke afọ 30. Dịka ọmụmaatụ, na-eji ihe nkpuchi ma ọ bụ na-eme ihe na GUERLAIN. Ekele ya, a na-eweghachi ihe na-agbanwe agbanwe nke anụ ahụ: akpụkpọ anụ nke na-agbanwe agbanwe, na-enwu. Ihe nzuzo nke ọrụ ọrụ ebube bụ ihe omimi ihe omimi nke orchid.
Mmiri ahụ na-eme agadi site na DR akara. SEBAGH nwere ngwongwo nke ntorobia, nke kachasi ike nke ndi sayensi maara. Ihe ndị fọdụrụnụ na-akwado ihe ọ na-eme ma saturate anụ ahụ na ihe ndị dị mkpa maka ememe ya.
Ụlọ ọrụ na-eme nchọpụta ORLANE na-atụ aro iwepụ ihe ịrịba ama nke ike aghara aghara aghara site na mkpirisi ahụ na-akpali akpali na nke na-akpali akpali nke mkpịsị aka nchịkọta ANTI-FATIGUE RECOVERY, nakwa dị ka ANTI-FATIGUE RECOVERY CARE EUE CONTOUR gel na-acha ọcha lily wepụ nke na-egbochi esemokwu na ọzịza gburugburu anya.
Anyị na-ahapụ maka ụgbọ elu ahụ! N'elu ụgbọ elu CELLCOSMET & CELLMEN, a hapụrụ ya maka njem ndị dị anya. A na-echekwa ngwaahịa ndị a kachasị amasị ma gosipụta na ha enweghị ihe karịrị 100 ml ma tinye ya na akpa akwa. Ọzọ, ezigbo ego - samplers maka nlekọta ahụ.
N'ihi akwa mma na ezigbo ihe ịchọ mma maka nwanyị nke afọ 30, akpụkpọ ahụ jupụtara na mmiri ma ghọọ ihe na-agbanwe. NKWU NDỊ KWESỊRỊ ỤBỌCHỊ NA-ECHICHE na LANCOME bụ ihe ọhụrụ nke ụlọ ọrụ a ma ama n'ụwa. "Obi" ya bụ usoro ntọala basal nke dabeere na nchịkọta nke mkpụrụ ndụ mkpụrụ osisi apụl nke na-enyere akpụkpọ ahụ aka ịmalitegharịa ike ya ịmeghachi. N'ime ụbọchị isii, a na-eweghachi ihe ịrịba ama nke onye na-eto eto.
Ndị njem anyị na-eto eto na-arụ ọrụ n'abalị, mgbe mgbagha na-eme ka ụwa dịghachi elu na-eme ka ọ bụrụ ihe dị nsọ na ESTEE LAUDER. Mmiri ahụ na-eme ka usoro mgbake ahụ dị ngwa ngwa, na-agbatịkwu ndụ ha mgbe anyị na-ezu ike.
Ihe na-adọrọ mmasị na-eme ka pajiji nke onyinyo dị mma site na PIERRE HERME si na HELENA RUBINSTEN: ha bara ọgaranya na velvety. Ha na-enyekwa aka ịmepụta ihe dị mma.
Ihe nchịkọta mara mma E.FUNKHOUSER NEW YORK 009: E mepụtara PARAMAUNT n'ebumnuche nke ọchịchọ nzuzo anyị - ịbụ, dịka Hollywood star. Nke a bụ akwụkwọ nke itoolu a kwadebere maka AMWAY site n'aka onye ama ama a ma ama bụ Eddie Funkhauser.
Anya nke anya site na VICHY - AQUALIA ANTIOX dị iche iche nwere mmetụta na-enye ume ọhụrụ, n'ihi nnukwu antioxidants ọ na-ebelata akpa n'okpuru anya na ọchịchịrị.
IHE STIMULSKIN PLUS sitere na DARPHIN bụ ihe mgbagwoju anya nke na-enyere aka mee ka mmepụta nke collagen dịkwuo elu. Ihe niile dị n'usoro isiokwu ahụ nwere ihe ndapụta nke osisi osisi, ihe ọ na-eme iji rụọ ọrụ - na-eweghachi elasticity nke akpụkpọ ahụ, na-emezi ihe na-emepụta ihu, na-eweghachi ihu ya.
OMBRE OWU NDỊ KWESỊRỊ ỤBỌCHỊ nke LANCOME na-ejikọta obere ntụ ntụ na nju ọkụ, nke pụtara na ha dị ncha, nke nwere nghọta dị egwu. Ha na-enye aja na-egbukepụ egbuke egbuke maka ndị na-edozi pigmenti ma nwee ezigbo nguzo. Na pallet - ntụrụndụ dị nro.
AKWỤKWỌ ECHICHE NA-ECHICHE N'ỤLỌ NTỤKWU NDỊ NA-AGBANYE NDỊ NA-AGBANWE ỌZỌ NA-ECHICHE. Ọ nwere usoro mmiri na-eme ka ike gwụ, na-eme ka ha gbanwee ma na-eguzogide ọgwụ ike na gburugburu ebe obibi. Nwanyị ya bụ ihe ntanetịrị ederede site na otu usoro ahụ: ọbụnadị na ndụ adịghị ndụ, ọ na-alọghachi na-egbuke egbuke, na-ejuputa ume.
Ihe nkedo na-eme ka ihe n 'onu ogugu di iche iche nwere ihe di iche iche nke na enyere aka weghachite odidi nke ntutu di na ala, na-eme ka mgbokorita na-eme ka o sie ike, na-egbochi onodu mmiri kwesiri.
D'OLIVA VITALFRISCH Q10 bụ ọkụ dị ọkụ na coenzyme Q10, vitamin E na squalene (bụ ihe na-akwalite saturation nke anụ ahụ na oxygen). Akụkụ ya ga-eme ka velvety akpụkpọ ahụ dị nro.
Ufuru AMBER ELIXIR si ORIFLAME na-agbanye nwanyị na-egbuke egbuke dị omimi na enweghị obi iru ala. Ihe omimi ya bu ihe omuma na ihe ndi di egwu nke nwa currant na mandarin, almọnd di nma na peony, sandalwood na musk.
Ihe na-esi ísì ụtọ nke NA BLOOM BY REESE WITHERSONON site na AVON bụ ihe na-adọrọ adọrọ ma mara mma, nke a kpara site na ntanetị mkpụrụ osisi gardenia na ahịhịa na-acha ọkụ, na ihe amber, osisi na peach epupụta ga-eji obi ụtọ na-emeso nwayi nke kachasi egwu.
Gel-gel maka ịsacha, mmiri ara ehi dị ọcha maka ịcha ọcha na ume ọhụrụ TOTAL ECHICHE 7 site na OLAY ọ bụghị nanị na-akpali usoro mmeghachi ahụ nke anụ ahụ, kama ọ na-enyekwa aka ịnọgide na-enwe ọkwa kachasị mma na ịlụ ọgụ na mgbaàmà asaa nke mgbanwe mgbanwe nke afọ.
Ịṅụ ụdị ejiji bụ usoro TAFT atọ TAA "DIAMOND OF DIAMONDS" si SCHWARZKOPF: maka ụdị edozi nke ọnọdụ ihu igwe ọ bụla ga-anwale. Uzo di iche iche na-eme ka edozi isi dika ihe siri ike ma nye ntutu isi nke diamond 10-carat. Usoro ahụ na-egosikwa ihe na-acha ọcha maka agba ntutu na-egbuke egbuke, nke na-echebe agba nke ajị ejiji na ogologo oge.
Kedu otu esi amata ọdịdị nke isi ísì mbụ sitere na adịgboroja: anyị na-amụta ịhọrọ mmanụ ala
BB cream maka ịma mma na ntorobịa
Aroma nke afọ 2009
Akụkọ nke ntụ ntụ
Uru na nsogbu site na ikuku oxygen
Best BB ude
Mmasị ụmụaka maka ụmụaka
Mistrust n'etiti nwoke na nwaanyị
Kedu otu esi ahọrọ akpa azu ulo akwukwo
Achicha na yabasị na cheese
Ịla aka n'ahụ nwa ọhụrụ
Cod na ginger na mmiri yabasị
Ezi anụ na ọkpụkpụ na carrots
Olga Buzova mara ọkwa agbamakwụkwọ ya
Schedrivky - akụkọ ihe mere eme, omenala, nkwenkwe. Akwụkwọ ederede nke mmesapụ aka n'asụsụ Russian na Ukraine
Kuki kuki maka Ụbọchị Valentine
Akụkọ ifo banyere nwanyi ara
Nzachaati Chocolate "Maka Abụọ"
Brynza na mmanụ na herbs
Ime ime afọ: ebe ị ga-amalite
Kuki nuki-banana na chocolate
Alexander Ovechkin na Anastasia Shubskaya lụrụ di na nwunye?
Ịkpụ ntutu na ime-elu maka ihu gburugburu